‘Tetezamitan’i Kambodza’ Bokin-tsary Mampiseho Ny Fampandrosoana Tsy Mirindra Ao Kambodza · Global Voices teny Malagasy
‘Tetezamitan'i Kambodza’ Bokin-tsary Mampiseho Ny Fampandrosoana Tsy Mirindra Ao Kambodza
Voadika ny 09 Aogositra 2015 9:21 GMT
Nalaina ny farihy Boeung Kak mba hanaovana tetikasa fananganan-trano. Afaka tazana eny afara ireo tranoben'ny Filankevitry ny Minisitra sy ny biraon'ny Praiminisitra. Sary avy tamin'i Nicolas Axelrod (7/7/2011)
Nahitàna fampandrosoana haingana i Kambodza tato anatin'ny roapolo taona farany, kanefa mbola mitohy mikiky ny firenena hatrany ny tsy fitoviana sy ny fahantrana. Niatrika fifidianana malalaka izy, nanome alàlana ny varotra malalaka, ary namoha ny sisintaniny tamin'ireo mpizahatany sy mpampiasa vola, saingy maro amin'ireo vahoakany no tsy afaka migoka tombontsoa avy amin'ireny fanovàna ireny.
Mitantara ny tantara maoderin'ny “firenena iray izay mbola voarirotra eo anelanelan'ny ny vesatry ny lasany nahatsiravina sy ny fampanantenan'ny ho avy” ilay bokin-tsary ‘Tetezamitan'i Kambodza’. Fiaraha-miasan'ilay mpaka sary Nicolas Axelrod sy ilay mpanao gazety Denise Hruby io, izy roalahy ireo izay niatrika ireo karazanà fiantraikan’ny fiakaran'i Kambodza ho firenena andalam-pandrosoana any amin'ireo vahoaka eo amin'ireo vondrom-piarahamonina isan-karazany manerana ny firenena.
Mitondra fijery fampahatsiahivana ny zava-misy marina eo amin'ny firenena ity bokin-tsary nahazoana famatsiam-bola ity, firenena izay mizotra mankany amin'ireo vinavinan'asany fampandrosoana goavana, raha toa kosa ireo mponina ao ka nitolona ny ho velona ao anatin'izany fiovàna izany.
Ankizy milalao ranom-potaka izay mivoaka amin'ny fantson-drano vaky. Mitroka fasika avy amin'ny farihy voajanahary ao amin'ny vondrom-piarahamonina Borei Reakreay ireo fantson-drano. Ny antsasaky ny taona 2009, noroahana tamin'ireo tranony ilay vondrom-piarahamonina mba hanomezana làlana ho an'ny fanamboarana toeram-ponenana feno ho an'ny mpanankarena. Sary avy tamin'i Nicolas Axelrod (27/03/2009)
Eto ambany ny tafatafa tamin'ny imailaka nifanaovanay tamin'i Nicolas sy i Denise:
Global Voices: Inona ireo tanjonareo tamin'ny fanaovana io tetikasa io?
Denise Hruby: Ny mba handrakitra an-tsary an'i Kambodza no tanjona, ilay firenena ao anatin'ny fotoanan'ny tetezamita haingana izay tena fototra — ary tsy ho azo iverenana ovaina intsony — manova ireo endrik'ireo tanànany, ireo politikany, ary ny bikan'ny fiarahamonina manontolo mihitsy. Tsy isalasalàna fa mila fampandrosoana tokoa i Kambodza amin'ireo sehatra rehetra ireo, kanefa tena manisy hantsana lehibe eo amin'ireo mahantra sy ireo mpanankarena ny fomba sasany nitondràna ireo fanovàna ireo. Matetika, ny dikan'ny fampandrosoana aty dia hoe mihamahantra hatrany ireo mahantra, raha toa ka mihamitombo hatrany kosa ny harenan'ireo mpanankarena.
Nicolas Axelrod: Vitsy ireo toerana eto an-tany izay niova haingana sy niova tanteraka tao anatin'ny fotoana fohy monja toa an'i Kambodza. Tsy hoe amin'ny endrika fotsiny, raha jerena ny fotodrafitrasa, fa amin'ny fomba fisainana ihany koa, nisy ny fiovan'ny fomba fisainan'ireo olona amin'ny lafiny politika sy amin'ny lafiny lanjan'ny fianakaviana. Ohatra: nanomboka tamin'ny fotoana izay mbola tsy dia noresahana firy ny politika ilay boky, efa niova izany ankehitriny. Mamaritra io fiovàna io ireo toko roa lehibe miresaka ny fianakaviana sy ny politika ireo, amin'ny fanomezana ny mpamaky ny sarintsarin'ny hoe taiza ny firenena, ary ny hoe ho aiza no mety handehanany. Ireo toko hafa – ny tany sy ny harena no mampiseho ny fomba nanaovana ilay fampandrosoana, ary ny fiantraikan'io tamin'ny mahantra sy ny mpanana.
Ireo mponina mitsoaka ny fiaravy lehibe miasa eo amin'ny sisan'ireo trano nopotehana nandritra ny fanesorana an-terisetra tany Dey Krahorm. Sary avy tamin'i Nicolas Axelrod (1/24/2009)
GV: Inona no tamberina nisy tao Kambodza mikasika io tetikasa io?
DH: Hatreto aloha nisy ny tamberina tena tsara avy amin'ireo Kambodziana, ary ireo sasany izay niresaka taminay mikasika ilay boky.
Samy tao anatin'ny fanombohana azy daholo na ireo vahiny na ireo Kambodziana, ary tany anaty media ihany koa, nahazo tsikera tsara tokoa ilay izy. Ny ankamaroan'ny olona no milaza aminay hoe faly izy ireo fa misy ilay boky mba tena mijery an'i Kambodza amin'ny endriny tokoa — tsy ireo tempoly mahafinaritr'i Angkor na ireo sary mampahatsiahy ireo ankizy mitondra sarety fotsiny. Nilaza azy io ho boky tena tokony hovakiana ireo mpandray fanapahan-kevitra, ho an'ireo manaraka ny raharaha Aziatika.
Moanina vonona hiatrika ny andro fahaefatra amin'ilay amin'ilay diabe folo andro ho an'ny Zon'olombelona ho any Phnom Penh izay atao amin'ny Làlam-pirenena faha 6. Taorian'ireo fifidianana faobe tany Kambodza ny volana jolay 2013, nandray anjara mavitrika tamin'ny politika sy ny fampiroboroboana ny Zon'olombelona ny vondron'ireo Moanina. Sary avy tamin'i Nicolas Axelrod (12/4/2013)
GV: Ahoana ny fijerinao ireo fomba fitondràna ny fampandrosoana an'i Kambodza? Inona no tokony homena laharam-pahamehana aloha?
DH: Ity rafitra latsaka lalina anaty kolikoly sy fanomezan-danja ny ireo olona akaiky ny mpitondra mifehy ny firenena manontolo ity no iray amin'ireo olana lehibe indrindran'i Kambodza. Mila am-polo taonany maro ny fanovàna an'io sy ny fametrahana ny firenena ho toeran'ny fitovian'ny lenta ho an'ny tsirairay, satria samy milalao eo daholo ny rehetra – manomboka amin'ny sefom-pokontany kely indrindra ka hatramin'ireo tompon'andraiki-panjakana ambony. Mbola misy tsy fahampiana goavana eo amin'ny fahazoana ny resaka kolikoly, ny hoe inona marina io ary inona no tena maha zava-doza azy io eo amin'ny fiarahamonina sy ny toekarena amin'ny sehatra midadasika kokoa. Atao hoe “volan-dite” ny tsolotra, ary toa tsy misy mahita zavatra ratsy amin'izany ny rehetra.
Mino aho fa ny fampianarana tsaratsara kokoa no tokony atao laharam-pahamehana faharoa. Efa nanome famatsiam-bola betsaka ho an'ny ministeran'ny fampianarana ny governemanta, ary nampiasa io ho an'ny fanovàna lehibe ny minisitra vaovao. Fa eto ihany koa, mbola olana lehibe ny kolikoly. Kely karama loatra ireo mpampianatra, ka mitaky saram-pianarana isan'andro amin'ireo mpianatra manatrika ny fianarana izy ireo, ary matetika ireo mahantra no tsy manana fahafahana mandoa izany.
Fa eto ihany koa no ahitako ny fanantenana lehibe ho an'i Kambadza ho amin'ny hoavy: Ambanin'ny 25 taona ny manodidina ny antsaky ny vahoaka. Io no vahoaka tanora indrindra ao amin'ny faritra. Ho fanalahidy ny fampiasàna vola amin'ny fanabeazana azy ireo.
Avy tamin'i Nicolas Axelrod daholo ireo sary rehetra, nahazoana alalana ny famerenana nandefa azy.